'ट्रमाका लागि आउनु पर्ने अक्सिजन पुलिसको ठूलो मान्छेहरु आएर लिएर गए, अत्यन्तै मर्माहत छु' पिडा छ हजुर जीवनमा डाक्टर भएँ ! मानव जीवनलाई माया गरेँ। आँखै अगाडि धेरै मृत्यु देखिरहेको छु, मजस्तै जीवनहरु तिमीहरुलाई बचाउँन सकिन, माफ गर हार्दिक श्रद्दान्जली प्रिय जीवनहरु! बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८
महामारी परास्त गर्न हाम्रो सजगता कोभिडि-१९ भएका व्यक्तिहरूका लागि क्वारेन्टिन र अस्पतालमा बस्दा उनीहरूको परिवार वा प्रियजनहरूसँग सम्पर्कको अभावले मनोवैज्ञानिक अस्थिरता उत्पन्न गर्दछ। पोस्ट-ट्रामाटिक लक्षणहरू यो रोगबाट निको भैसकेको निकै समय पछि पनि देख्न सकिन्छ I आइतबार, वैशाख २६, २०७८
कोरोनाको त्रास र सुरक्षित रहने उपाय समय अझै घर्किसकेको छैन। ढिला भएको पक्कै हो तर अझै पनि समय बाँकी छ। अवस्था जटिलतातर्फ अघि बढिरहे पनि समय बितिनै सकेको भने छैन। बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
शरीरका हाड सजिलै भाँचिने अवस्था 'ओस्टियोजेनेसिस इम्पेर्फेक्टा' र विसबोन डे यसबारे जनचेतना जगाउने र पहिचान समय नै होस् भन्ने हेतुले संसार भर अङ्रेजी महिना 'मे' को ६ तरिकका दिन संसार भर सजिलै हाड भाँचिने अवस्था अथार्त अस्टियो जेनेसिस इम्पेर्फेक्टा बारे जनचेतनामुलक विविध कार्यक्रम गरी गर्ने गरिन्छ। बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
मिडवाइफमा लगानी: आजको टड्कारो आवश्यकता नेपालको सन्दर्भमा मिडवाइफको अभावको त के कुरा, मिडवाइफ्रीको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न पनि सकिएको छैन। केही दशकदेखि सरकारले अक्जुलरी नर्स एण्ड मिडवाइफ्रीको १८ महिने तालिमको व्यवस्था गरेतापनि व्यवसायिक रुपमा मिडवाइफ्रीको त्यो भन्दा उच्च स्तरको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न सकेको थिएन। बुधबार, वैशाख २२, २०७८
आँकडालाई अनुसरण गरौं, मिडवाइफमा लगानी गरौं मिडवाइफ्री शिक्षा र सेवामा लगानी गरी मिडवाइफ्री जनशक्तिलाई समुदाय–आधारित सेवामा परिचालन गरेमा मातृ तथा नवजात शिशुको जीवन बचाएर र अनावश्यक शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च लागत हटाएर १६ गुणा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दछ। बुधबार, वैशाख २२, २०७८
जनस्वास्थ्य नीतिमाथि गम्भीर प्रस्न प्रस्नहरु जटिल छन् र उत्तर सरकार तथा सम्बन्धित निकायले जनस्वास्थ्यको दर्सनशास्त्रीय विधिको आधारमा खोज्ने बेला आएको छ। मंगलबार, वैशाख २१, २०७८
कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा एकात्मक स्वास्थ्य प्रणाली किन आवश्यक? कठोर अनुशासन, जवाफदेहिता, स्रोत साधनको पहिचान र अधिकतम परिचालन, चेन अफ कमाण्ड लगायतका व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्दान्तहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो। सोमबार, वैशाख २०, २०७८
हुम्लामा कोरोना महामारीलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिन के-के गर्ने? राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेको एक मात्र हिमाली जिल्ला हुम्लामा पनि संक्रमण बढ्ने क्रममा देखिन्छ। हुम्लामा दैनिक नेपाल्गन्ज र सुर्खेत बाट ३ देखि ४ उडान हुने गर्छन। सोमबार, वैशाख २०, २०७८
मौलिक हकमा सरकारको आत्मसमर्पण नागरिकलाई अस्पतालको गेट अघिल्तिर तड्पिएर मर्न बाध्य पार्ने र त्यो संख्या बढ्दै जाने स्थिति सिर्जना गर्नेहरु सबैको उचित समयमा समीक्षा हुने नै छ। शनिबार, वैशाख १८, २०७८
कोरोना महामारीलाई २ महिनाभित्र पूर्ण नियन्त्रणमा लिन के के गर्ने? के कोरोनालाई जति सक्दो छिटो पूर्ण नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ? यो प्रश्नको उत्तर भने धेरै जटिल बन्दै गएको छ। कोरोना महामारीलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिन कम्तिमा दुई चरणका तयारी आवश्यक छ। शनिबार, वैशाख १८, २०७८
कोभिड-१९को दोस्रो लहर र हाम्रो सुरक्षा एक वा बढी नयाँ उत्परिवर्तनहरू भएको भाइरसलाई मूल भाइरसको "भेरियन्ट" भनेर चिनिन्छ। जब भाइरस जनसंख्यामा व्यापक रूपमा प्रसारण हुन्छ र धेरै संक्रमणहरू निम्त्याउँछ, भाइरस उत्परिवर्तनको सम्भावना बढ्छ। शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८
कोरोनाको पहिलो लहरमा भएका यी ५ गल्ती फेरि नदोहोर्‍याऔं विगतको लहरमा हाम्रो देश अलि तातेको हो। चाँडै लकडाउन गर्‍यो। त्यसका पीडा पनि नागरिकले भोगे। तर, अघिल्लो वर्ष ठिकै नियन्त्रण गरेको मान्नुपर्छ। बिहीबार, वैशाख १६, २०७८
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नः कोरोनाको विषय संसदको बिजनेस नै लागेन तपाईंलाई? प्रधानमन्त्रीको दैनिकी हामीले हेर्‍यौं। प्राथमिकताका कार्यक्रम हेर्‍यौं। व्यस्तता पनि हेर्‍यौं। कोरोनाका बारेमा कति छलफल गर्नुभयो हेर्‍यौं भने सबै छर्लङ हुन्छ। यो विषय तपाईंको कहिले पनि बिजनेस बनेन। बुधबार, वैशाख १५, २०७८
‘जटिल अवस्थाका बिरामीको व्यवस्थापनमा गाह्रो भइरहेको छ’ अहिले भर्ना भएका बिरामी कलेज जाने विद्यार्थीदेखि वृद्धवृद्धा छन्। हरेक दिन पिसिआर परीक्षणको ७० देखि ८० प्रतिशतलाई पोजिटिभ देखिएको छ भने ९० प्रतिशत लक्षणसहितका बिरामी छन्। शनिबार, वैशाख ११, २०७८
कोरोनाबाट बच्ने की डराउने? यो कारण फेरी पनि दोहोरिएको छ। भारतसँगको खुला सीमानाकाका कारण नेपालमा पुनः कोरोना संक्रमण बढ्ने देखिन्छ। कोरोना महामारी बढ्न नदिन सरकार र स्वास्थ्यकर्मी तयार अवस्थामा रहनुपर्ने आवश्यकता छ। शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८
कोभिडको दोस्रो लहर : के हाम्रो पूर्वतयारी छ? महामारीको दोस्रो लहरको सामना गर्नका लागि आजैदेखि सावधानी अपनाएर सचेत बन्न जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि आफ्ना संयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बुधबार, वैशाख ८, २०७८
स्वास्थ्य क्षेत्रका मुख्य ८ चुनौती र समाधानका उपाय समस्याको पहिचान गरी केही नीतिगत परिवर्तन र केही कार्यान्वयन तहमा व्यवस्थापकीय कुशलतामात्र प्रदर्शन गर्न सकियो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो सकारात्मक फड्को मार्ने निश्चित प्रायः छ। बुधबार, चैत २५, २०७७
किशोरावस्थामा कुलतको जोखिम किन बढी हुछ? कसरी जोगिने? आफू प्रतिको धारणा, आत्मसम्मानको जगेर्ना, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधानको सीप विकास साथै, कला, खेल, अध्ययन जस्ता स्वस्थ रुचीहरुको विकास पनि दुर्व्यसनीबाट जोगिनको लागि अति महत्वपूर्ण हुन्छन्। शनिबार, चैत २१, २०७७
मास्क - कपडाकै ठिक! कतिपय देशमा कपडाको गुणस्तरीय मास्क बनाएर प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा हामीले पनि पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने, वातावरण प्रदूषण गर्ने, खर्चिलो सर्जिकल मास्कको विकल्प खोज्नेा बेला भयो कि? शुक्रबार, चैत २०, २०७७
प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी नर्सहरुको खुलापत्र, भन्छन्- हामी अन्यायमा पर्यौं चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ पश्चात सो कोटा हटाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं। स्नाकतक तहमा अध्ययन गर्न सरकारी कोटाको आवश्यक पर्ने होइन र? बिहीबार, चैत १९, २०७७
वायु प्रदूषणले हुने स्वास्थ्य समस्या र न्यूनीकरणका उपाय वायु प्रदूषणले केवल विद्यार्थीहरूलाई मात्र असर गर्दैन, यसले जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई असर गर्ने भएकोले हामी सबै सचेत भई यसको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ। बिहीबार, चैत १९, २०७७
उपचारको आधार : इएमआर इएमआर नेपालमा सुरु नै नभएको होइन, बिस्तारै सुरु हुँदै छ। प्रयोग गरेर प्रतिक्रिया दिने व्यक्तिको आवश्यक्ता छ। प्रतिक्रिया अनुरुप पार्ने विशेषज्ञको आवश्यकता छ। बुधबार, चैत १८, २०७७
कोरोनाको दोस्रो लहर, लड्न तयार बनौं स्वस्थ्यकर्मी हो भारत तथा नेपालका खुल्ला तथा अव्यवस्थित सीमानाकाका कारण नेपाल अति जोखिममा छ। मानिसमा लापरवाही बढेको अवस्था छ। कोरोनाले केही हुँदैन भन्ने दम्भी मानसिकता हामीमा पलाएको छ। शनिबार, चैत १४, २०७७
मनलाई शान्त राख्न र धैर्य नगुमाउन के गर्ने? मनलाई शान्त राख्न गरिने अभ्यासले संकट आएका बेला छालका रुपमा आउने संवेगहरुलाई समुद्ररुपी चेतनामा समायोजित गर्न आघात निरोधकको काम गर्छ। शनिबार, चैत १४, २०७७
‘संकेत समयको, क्षयरोग अन्त्यको’ क्षयरोगको रोकथाम/नियन्त्रण तथा निर्मूलबारे समुदायस्तरसम्म जनचेतना अभिवृद्धि गरी सन् २०२२ सम्ममा क्षयरोगलाई विश्वबाटै अन्त्य गर्न माथिल्लो तहदेखि सबैतहसम्म भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु हो। बुधबार, चैत ११, २०७७
क्षयरोग : रोकथाम र उपचार गर्न सकिने जनस्वस्थ्य समस्या क्षयरोग एक सरुवा रोग भएकोले यसबाट रोगको रोकथाम गरे सजिलैसंग बच्न सकिन्छ। बच्ने उपाए अपनाउदा अपनाउदै पनि रोगको शंका लाग्ना साथ नजिकको अस्पतालमा गई रोगको निदान गरि पूर्ण उपचार गरे योे रोग पूर्ण रुपमा निको हुन्छ। बुधबार, चैत ११, २०७७